တောင်ကုတ်တွင် မူဆလင် ၁၀ ဦး အသတ်ခံရမူနှင့် ဆက်စပ်ပြီး လူ ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« UK selling weapons to human rights abusers like Myanmar
Special Report – Smugglers and security forces prey on Asia’s new boat people »
တောင်ကုတ်တွင် မူဆလင် ၁၀ ဦး အသတ်ခံရမူနှင့် ဆက်စပ်ပြီး လူ ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွား
Why now only?
( နိရဉ္စရာ- ၁၈ ဇူလိူင် ၂၀၁၃) / မောင်အေး
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့တွင် ရခိုင်အမျိုးသား ၆ ဦးကို ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ ညဉ့်အချိန်တွင် အာဏာ ပိုင်များမှ ဖမ်းဆီးပြီး သံတွဲ အကျဉ်းထောင်ကို ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ ၆ ဦးမှာ ကိုသိန်းမောင်ခေါ် ထွန်းနိုင် (ဘ) ဦးဝေထွန်းစိန်၊ ကိုဝင်းနိုင်ခေါ် မောင်ပု၊ ကိုသိန်းရွှေမောင် (ဘ) ဦးထွန်းအောင်ကျော်၊ ဦးထွန်းကျော် (ဘ) ဦးကျော်ထွီး၊ ပေါက် ဆိန်ခေါ် ထွန်းမြင့်နှင့် ဦးထွန်းဝင်းတို့ ဖြစ်ကြောင်း တောင်ကုတ်မြို့မှ ဦးတင်သိန်းအောင်က အတည်ပြု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ သူတို့ ၆ ဦးကို အာဏာပိုင်များမှ ဖမ်းဆီးခြင်းမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ပထမ အပတ် အတွင်းက မူဆလင် ၁၀ ဦး တောင်ကုတ်မြို့တွင် အသတ်ခံရသည့် အမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်နေကြောင်း ဦးတင်သိန်းအောင်ကယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ သူတို့ကို မနေ့ည ၁၁ နာရီခန့်မှာ ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ မနက်ကမှ သိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိရသလောက်က ရိုးမသစ္စာကားမှာ ပါလာတဲ့ မူဆလင် ၁၀ ဦးကို သတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ဖမ်းတယ် လို့ဘဲ ကျွန်တော်တို့ သိရတယ်။”
သူတို့ ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီးပြီးသည်နှင့်ချက်ချင်း သံတွဲအကျဉ်းထောင်သို့ ယူဆောင်သွားကြောင်း သူက ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ရခိုင်အမျိုးသား ၆ ဦးဖမ်းဆီးခံရမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အသေးစိတ် သိရှိနိုင်ရန် တောင်ကုတ် ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း တာဝန်ကျဒုရဲအုပ် တစ်ဦး ဖုန်းကိုင်ပြီး တစုံတရာ ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်းမရှိဘဲ ဖုံးချသွားခဲ့သည်။
ယခုအခါ တောင်ကုတ်မြို့တွင် လုံခြုံရေးကို တိုးချထားကြောင်းလည်း ဦးတင်သိန်းအောင်က ပြောသည်။
“ အခုတော့ မြို့မှာ လုံခြုံရေးတိုးချထားပါတယ်။ ဘုရားမှာလည်းရှိတယ်။ မြို့တော်ခန်းမမှာလည်း လုံခြုံရေးအင်အား ၂၀ ခန့်ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အာဇာနည်နေ့ကျင့်ပဖို့ စီစဉ်နေတာနဲ့ ချတာလား သူတို့ ၆ ဦးကိစ္စနဲ့ ချတာလားတော့မသိဘူး” ဟု ဆိုသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်က မေလ ၂၈ ရက်နေ့က ရမ်းဗြဲမြို့နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာသူ မသီတာထွေးကို မူဆလင် လူငယ် ၃ ဦးက မုဒိမ်းကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က သံတွဲမြို့မှ လာသည့် ရိုးမသစ္စာကားကို တောင်ကုတ်တွင် လူအုပ်ကြီး တစ်ခုက တိုက်ခိုက်ရာ ကားပေါ်တွင် ပါလာသူ မူဆလင် ၁၀ ဦးကို သေဆုံးခဲ့သည်။
This entry was posted on July 18, 2013 at 7:23 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “တောင်ကုတ်တွင် မူဆလင် ၁၀ ဦး အသတ်ခံရမူနှင့် ဆက်စပ်ပြီး လူ ၆ ဦးကို ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွား”
တောင်ကုတ်လူသတ်မှု သံသယရှိသူများကို ဖမ်းဆီး(Thit Htoo Lwin)
မနှစ်က တောင်ကုတ်မြို့ မွတ်စလင် ၁၀ ဦး သတ်ဖြတ်ခံရမှုမှာ ဦးဆောင်တယ်လို့ သံသယရှိသူ ၆ ဦးကို နေပြည်တော်က တိုက်ရိုက်ကွပ်ကဲမှုနဲ့ တောင်ကုတ်မြို့ကနေ ဇူလိုင် ၁၇ ရက်နေ့ညမှာ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ သံတွဲခရိုင် သတင်းမှန်ဖော်ထုတ်ရေးအဖွဲ့က အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းနိုင်က ပြောပါတယ်။
ညမထွက်ရအမိန့်ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ သံတွဲမြို့ကို နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့က ရောက်လာပြီး ဖမ်းဆီးမှုကို သတင်းမပေါက်ကြားအောင် စီစဉ်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး သံတွဲထောင်မှာ ချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။
တောင်ကုတ်ဒေသခံတွေကို မေးမြန်းတဲ့အခါ ဒီကိစ္စကို ဇူလိုင် ၁၈ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းကျမှ ကြားသိရပြီး နယ်မြေခံတပ်ကလူတွေတောင် မသိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဒီမနက်မှာတော့ တောင်ကုတ်မြို့မှာ ရဲလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
သံတွဲမြို့ကနေ ရန်ကုန်ကို သွားတဲ့ကားတစီးကို တောင်ကုတ်မြို့အရောက်မှာ ကားပေါ်ပါ မွတ်စလင် ၈ ဦးနဲ့ သံတွဲမြို့ခံ ၂ ဦးကို အမည်မသိ လူအုပ်စုတစုက တုတ်၊ ဓားတွေနဲ့ ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်မဖြစ်မီ မနက်ပိုင်းလောက်ကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်နီမော်ကျေးရွာမှာ သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးရဲ့ပုံတွေ တောင်ကုတ်မြို့မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။
by အေးနိုင် (ဒီဗွီဘီ)